‘कविता लेख्नु नांगो तार समात्नुजस्तै हो’ – HostKhabar ::
‘कविता लेख्नु नांगो तार समात्नुजस्तै हो’
पाँच दशकदेखि कविता लेखिरहेका शैलेन्द्र साकार नेपाली कवितामा लोकप्रिय नाम हो। उनका ‘सर्पहरू गीत सुन्दैनन्’, ‘शैलेन्द्र साकारका कविता’ र ‘नांगो तार’ कवितासंग्रह प्रकाशित छन्।
उनी विम्बको सुन्दर संयोजनका लागि परिचित छन्। कवि साकारको हालसालै संस्मराणात्मक किताब ‘भोजपुरका हुलाकी सन्तान’ प्रकाशित छ। उनीसँग नेपाली कविता र उनको साहित्यिक जीवनमाथि केन्द्रित रहेर ‘अन्नपूर्ण सम्पूर्ण’का लागि निर्भीकजंग रायमाझीले संवाद गरेका छन्।
साहित्य लेखनमा प्रत्यक्ष जोडिएको पाँच दशक पूरा भएर हो वा आफ्नो उमेरले पनि संस्मरण लेख्नुपर्छ भनेर हो, ‘भोजपुरका हुलाकी सन्तान’ लेख्नुभएको ?
अमेरिका बस्ने क्रममा के गरूँ, के गरूँ हुँदा हरेक दिन मनमा लागेका कुरा लेख्दै गएँ। यसरी आफ्नो कुरा लेख्दै जाँदा संस्मरण भयो। योबाहेक डायरीकै शैलीमा अर्को एउटा संस्मराणात्मक किताब पनि लेखेको छु। त्यसको नाम ‘संसारसँग कुराकानी’ दिएको छु। ‘भोजपुरे हुलाकीका सन्तान’मा मेरो साहित्यिक जीवन, मैले चिनेका राजनीतिक नेताबारे बढी लेखेको छु। डा। केआई सिंह, पुष्पलाल, नारदमुनि थुलुङबारे जोडिएका रमाइला घटना पनि यसमा जोडेको छु। हिरण्यलाल श्रेष्ठले मलाई राजनीतिसँग जोड्न खोजेको घटनादेखि संगत गरेका साथीभाइबारे पनि संस्मरणमा लेखेको छु।
कविता लेखनमा पाँच दशक बिताउँदा विभिन्न साहित्यिक आन्दोलन, गतिविधि र साहित्यिक समूहसँग जोडिनुभयो। एउटा कविलाई यस्तो आबद्धताको आवश्यकता किन पर्छ ?
पहिला हामीले २०२६ सालमा ‘अस्वीकृत जमात’ सुरु गरेका थियौँ। कविताराम श्रेष्ठ, रमेश श्रेष्ठ, म र प्रकाश प्रेमी मिलेर त्यो साहित्यिक आन्दोलन सुरु भयो। पाँच दशकअघि सबै साहित्य ठूला मानिस र तिनकै सेरोफरोमा लेखिन्थ्यो। आम मानिसका दुःख–सुखबारे लेखिएकै थिएन। यसपछि म ‘सडक कविता क्रान्ति’ र ‘बुटपालिस आन्दोलन’सँग पनि जोडिएँ। एक दिनको घटना हो, कवि वाशु शशीको घरमा मलयराय चौधरी, करण रायलगायत ‘हंग्री जेनरेसन’सँग जोडिएका भारतीय साहित्यकार आएका थिए। त्यसबेला उनीहरूले भने, ‘भातै खान वा जीविकोपार्जन गर्न त अर्कै काम गरे भयो, साहित्य किन लेख्नु रु तर, लेखेपछि समाजसँग जोडिएको हुनुपर्‍यो।’ यो घटनापछि मलाई पनि साहित्यमा झनै सक्रिय हुन प्रेरणा मिल्यो। अथवा, यसो भनौँ, कविता यात्रासँग जोडिरहँदा म कुनै न कुनै गतिविधिमा संलग्न रहनुले मेरो सक्रियता स्वतः देखायो। केही आन्तरिक ऊर्जा रहेछ ममा, जसले मलाई कविताको बाटोमा अविच्छिन्न हिँडिरहन प्रेरित गर्‍यो।
दिनको घटना हो, कवि वाशु शशीको घरमा मलयराय चौधरी, करण रायलगायत ‘हंग्री जेनरेसन’सँग जोडिएका भारतीय साहित्यकार आएका थिए। त्यसबेला उनीहरूले भने, ‘भातै खान वा जीविकोपार्जन गर्न त अर्कै काम गरे भयो, साहित्य किन लेख्नु रु तर, लेखेपछि समाजसँग जोडिएको हुनुपर्‍यो।’ यो घटनापछि मलाई पनि साहित्यमा झन् सक्रिय हुन प्रेरणा मिल्यो।
निबन्धकार एवं पत्रकार किशोर नेपालले ‘मेरो पुस्ताको नेपाली आधुनिक कविताको नेतृत्व गर्ने कवि कवि शैलेन्द्र साकार हो’ भनेर धेरै पटक लेख्नुभएको छ। के कविता र साहित्यमा पनि नेतृत्व हुन्छ ?
किशोर आफूलाई लागेको कुरा निर्भीकतापूर्वक भन्छन्। यो उनको विशिष्ट गुण हो। फेरि उनलाई मेरो लेखन मन पर्ने भएकाले र मेरो लेखनले पारेको प्रभावबारे भन्न खोज्दा यो वाक्य भने होलान्। तर, मलाई के लाग्छ भने लेखनमा अग्रपंक्ति हुन्छ, जसले साहित्य लेखनको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नयाँ–नयाँ शैली र विचार दिएर साहित्यलाई जीवन्त बनाउन सक्छ। एक पुस्ता र अर्को पुस्ताबीच केही भिन्नता हुन्छन्। यसैको आधारमा साहित्यको नेतृत्वलाई सामान्य अर्थमा लिन सकिन्छ।
‘सर्पहरू गीत सुन्दैनन्’ भन्ने कविता लेख्दाको परिवेश र आजको राजनीतिक सामाजिक परिवेशमा समानता पाउनुहुन्छ ?
वास्तवमा मैले यो कविता लेख्दा राजनीतिबारे त्यति ध्यान दिएको थिइनँ। एउटा जादुगरले एक ठाउँमा सर्प नचाएर बसिरहेको थियो। मैले त्यसलाई सर्पहरू गीतमा नाच्छन् हो भनेर सोधेँ। उसले भन्यो, ‘सर्पहरूको कान नै हुँदैन, यिनीहरूको नाच देखाउन मात्रै मैले गीत सुनाइदिएको हुँ।’ यसपछि मैले यो कविता लेखेँ। तर, यो कविताले राजनीति र समाजको कुरूप यथार्थलाई उतारेको हुनाले सधैँका लागि सान्दर्भिक हुन गयो। आखिर नेपालको राजनीतिक परिवेशमा पनि कहिल्यै नयाँपन आएन। हामीले पूजनीय र नायक मानेका मानिस नै खलनायक भएका छन्। नागरिकले सुखको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।
‘नांगो तार’जस्तो ‘लामो, प्रयोगवादी र जटिल’ कविता लेख्नुभयो। तर, अहिले प्रयोगधर्मी र अमूर्त कविता सुस्ताएको देखिन्छ। के यो धाराको कविताको युग सकिएको हो ?
वास्तवमा प्रयोगधर्मिता कहिल्यै पनि सकिँदैन। संसारभरि नै ‘इन्फर्मल’ लेखन शैली चलेको छ। अनौपचारिक कविताको समय छ। ठूलठूला शब्द थुपारेर होइन कि सरल र अर्थपूर्ण शब्द राखेर लेख्दा पढ्नेलाई पनि यो त मजस्तै मानिस रहेछ भन्ने बोध हुन्छ। मैले ‘नांगो तार’मा यही शैलीलाई प्राथमिकता दिएको छु।
वास्तवमा यो लामो कवितामा मैले के भन्न खोजेँ भने कविता लेख्नु भनेको बिजुलीको नांगो तारलाई समात्नुजस्तो रहेछ। अनि, नांगो तारलाई छँुदा जो अनुभूति हुन्छ, कविता पढ्दा त्यही अनुभूति हुनुपर्छ।
तपाईं कवितामा कलाको पक्षपाती हुनुहुन्छ। कवितामा कलापक्षको सबलीकरण अनिवार्य नै हुन्छ ?
कविता राजनीति होइन। यसले समाजलाई सधैँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। विम्ब र प्रतीकको उत्कृष्ट संयोजन गर्न सक्यो भने त्यही कविता प्रभावशाली हुन्छ। कला भएन भने त त्यो भाषण भयो। कलाबिना कविता निरस र प्रभावहीन हुन्छ। त्यसले कहीँ कतै प्रभाव पार्दैन।
कविता लेखनको प्रारम्भिक अवस्थादेखि आजको समयसम्म तपाईंलाई प्रभाव पारेका कवि को–को हुन् ?
मैले लेख्न थाल्दा गोपालप्रसाद रिमालको प्रभाव बढी परेको थियो। त्यस्तै नेपालबाहिरका कविमा मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, मंगलेश डबरालको प्रभाव थियो। अमेरिकी कविमा चाहिँ एलेन्स गिन्सवर्ग, लरेन्स फर्लिंगेटी बढी मन पर्छन्। वाशु शशी, भूपी शेरचन पनि मलाई मन पर्छन्। सँगसँगै, समकालीन साथीहरूको रचनाले पनि मलाई प्रभाव पारेका छन्।
कविता भन्नेबित्तिकै समकालीन र युग विशेषको कुरा आउने गर्छ। आजको ९पछिल्लो एक दशक० को कविता लेखन शैली, विविधता र कविताको स्वरलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
आजको कविता सुन्दा(पढ्दा मलाई के बोध भयो भने जानेर वा नजानेर नयाँ–नयाँ विम्बको खोजी भएको छ कवितामा। अनि, अनौपचारिक शैली ९इन्फर्मल क्राफ्टिङ० को प्रभाव परेको छ। ठूलठूला दर्शन दिनेभन्दा पनि साना तर जीवनलाई प्रभाव पार्ने कुराहरूलाई केन्द्रमा राखिएको छ।
हुन त कोही–कोही कविले कहिल्यै पनि सत्ताको विपक्षमा गएर लेखेका छैनन्। तिनलाई केही उपलब्धि मिले पनि त्यो क्षणिक हो। हामीले कोही खुशी होला, कोही दुःखी बन्ला र केही लाभ मिल्छ कि भनेर कविता लेखेको होइन। यसर्थ निर्भीकतापूर्वक आफ्नो कुरा कलात्मक शैलीमा लेख्नु नै आजको कविता हो भन्ने मलाई लाग्छ।
सम्पूर्ण साप्ताहिक पत्रिकाबाट